Matambudziko nemaVR magirazi ako paLinux? Mhinduro inogoneka | Linux Vakapindwa muropa
Matambudziko nemaVR magirazi ako paLinux? Inogoneka mhinduro
Isaac | | Graphics, chiutsi
Vamwe vashandisi vekuparadzirwa kweLinux vari kusangana nemamwe matambudziko nemidziyo kana Magirazi eVR. Kugadzirisa nyaya idzi neVR, iwe unogona kuyedza kuremadza asynchronous playback. Chinhu chinoratidzika kunge chiri kushanda muzviitiko zvakawanda.
La chaiyo chaiyo, yakawedzera chokwadi uye yakavhenganiswa chokwadi ivo vachiri kunyanya chinhu cheWindows, kunyangwe paine mamwe mapurojekiti ekuunzawo kuLinux uye kuti nguva imwe neimwe kuenderana kunowedzerwa uye mashandiro ayo anovandudza. Nekudaro, kuchine mamwe matambudziko, hatisi kuzozvinyengera ...
Semuenzaniso, munguva pfupi yapfuura vamwe vashandisi vari kusangana nemamwe matambudziko ane chekuita neyakagadziriswa yavanogashira SteamVR paLinux. Kunyangwe izvi zviri kuitika, Vagadziri veValve vakatarisa pane dzimwe nyaya uye zvinoita sekunge ivo havana kukoshesa panguva ino. Uye zvakajairika, sezvo huwandu hwevashandisi muLinux hausi hwakawanda sekune mamwe mapuratifomu kwavanoisa zvimwe zviwanikwa ...
Hakusi kushoropodza Valve, isu tinofanirwa kubvuma kuti vakapa zvakawanda, seProton, chimwe chinhu chavari kutendeuka zvakanyanya uye icho chakatibvumidza kumhanyisa akawanda mazita eWindows paLinux uye kuti anoshanda zvinoshamisa ...
Imwe yematambudziko ine chekuita nemamwe lags anogona kunetsa kana uchishandisa SteamVR. Dambudziko iri rinoitika kunyanya nevashandisi ve AMD. Uye kunyangwe hofisi yebug yakavhurwa muna Gumiguru 2020, ichiripo. Zvisinei, zvakawanikwa kuti zvine chekuita nazvo asynchronous kushorwa. Icho chimiro chinobatsira kana iyo GPU yakati izere. Iine iyo NVIDIA 470.42.01 mutyairi yekuvandudza yaJune 2021 dambudziko rakawedzerwa nekuwedzera senge asynchrony basa muLinux futi.
Kune rimwe divi, mimwe chaiyo mitambo inowira mushure memaminetsi mashoma nekodhi ye kukanganisa -203. Uye izvi zvakare zvinoita kunge zvine chekuita nechikonzero chimwe chete seizvo zvakatsanangurwa pamusoro.
Naizvozvo, kuti usamise basa iri uye kudzivirira matambudziko akadaro, unofanirwa tevera nhanho idzi:
Enda ku ~ / .Steam / Steam / gadziriso /.
Tsvaga iyo faira inonzi vezvideoXNUMX.plus.
Vhura iyo faira ne zvinyorwa zvemavara.
Uye unofanira gadzira iyi tambo kuchinja izvo zvazvino ichokwadi kuenda kunhema:
Sevha shanduko. Ndinovimba kana chokwadi chashandurwa kuita chenhema, dambudziko rinofanira kuenda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Matambudziko nemaVR magirazi ako paLinux? Inogoneka mhinduro
Dzimwe nzira mbiri kuGoogle kuziva kwatakamira
GNOME 41 Beta inosvika pamwe nekumwe kugadzirisa muWayland uye inounza nyowani nyowani yekufona app